Indawo efanelekileyo yeentsapho
I-ANETO APARTIMENTI ifumaneka kwidolophu yase-Es Bòrdes kwisakhiwo esinemigangatho emi-3 ene-elevator, inamagumbi okulala ama-3, igumbi lokuhlala elinekhitshi. Inegadi enkulu yasekuhlaleni, indawo yokonwaba nosapho, iikhilomitha ezingama-20 ukusuka eBaqueira Beret.
Onke amagumbi aneWifi.
I-ARAN APARTMENT enomthamo weendwendwe ze-7 + 2, ihanjiswe kumgangatho omnye ophantsi, igumbi lokuhlala-igumbi lokudlela elinendawo yomlilo, ibhedi ye-sofa yabantu be-2 kunye nokufikelela kwi-terrace encinci, enekhitshi evulekile ngokupheleleyo.
Amagumbi okulala asasazwe ngolu hlobo lulandelayo, igumbi eliphindwe kabini elinegumbi lokuhlambela eline-en-suite kunye nokufikelela kwi-terrace, igumbi elineebhedi ezi-2 ezingatshatanga kunye nelinye igumbi elinebhedi enebhedi ezakhelwe ngaphakathi kunye nebhedi enye enegumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo. ishawa.
I-ANETO APARTMENT ziikhilomitha ezili-9 ukusuka kwikomkhulu le-Aran Vielha Valley, iikhilomitha ezili-9 kude unokonwabela iibhafu ezishushu eBaronía de Les iibhafu ezishushu, iikhilomitha ezi-6 kude ufumane ipaki yasendle yaseAran-Park.
Ndwendwela iArtiga de Lin Valley, umthombo woMlambo iJoeu.
Ilungele ukuziqhelanisa neendlela zokuhamba ngebhayisekile entabeni, ukukhwela intaba, ukubaleka umkhondo, ukuloba, ukukhwela intaba.
Chitha iintsuku ongalibalekiyo kunye nosapho okanye abahlobo bakho eVallle de Aran.